Njengokuba isemthethweni drug ingxaki abantu besebenza a ngezixhobo ezahlukeneyo kwiimeko. Xa wamanzi acociweyo nabo okanye nyanzela intlungu. Xa ekubeni fun. Xa esiva ukusuka addiction. Okanye compassionate ngakulo kwembandezelo zabo bathanda okkt hooked kwi needle. Xa ufuna ukufumana uncedo kwi-eklinikhi. Okanye portrayed cannabis emagqabini kwi-scarves.
Kananjalo xa sukuba khangela ukuba sifakwe kwi-floor kwi nightclub, wathumela kuba njalo, kuthathelwe ngaphandle ukususela pocket ukulinywa a packet ka-mhlophe ngumgubo, kwambatha yovavanyo, saliwe zonyango unyango deprived ka-parental amalungelo, wawulahla umphefumlo wakho umsebenzi.
Abantu bona umthetho, okanye ukungabikho komthetho. Victims of izinto ezonakeleyo imithetho okanye zabo perverted sebenzisa.
Le webhusayithi ngu conceived njengoko a umba yamalungelo oluntu uncedo. Zethu umsebenzi umele ukunika iingcebiso, ukufundisa ukhuseleko ubugcisa, phakamisa ilungelo inyathelo lesi-ukubonisa njani umthetho unako ukusebenza, ukuhlola prospects. Thina ukukhusela amalungelo, nokukhululeka kwaye legitimate izinto ezichaphazela umntu ngamnye, likhokelwa-Siseko, imigaqo kwaye norms komthetho wamazwe ngamazwe.
WOKUQHAWULA UMTSHATO LAWYER